ယူရိုပါလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲအပြီး ချယ်ဆီးကို နုတ်ဆက်ထွက်ခွာမယ့် အီဒင်ဟာဇက် - Sports Home Time
ယူရိုပါလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲအပြီး ချယ်ဆီးကို နုတ်ဆက်ထွက်ခွာမယ့် အီဒင်ဟာဇက်
အီဒင်ဟာဇက်ကတော့ သူ့ရဲ့ အနာဂတ်အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြုလုပ်ထားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမယ့်လို့ ဘယ်ဂျီယံကစားသမားဟာ ကလပ်အသင်းကနေ ထွက်ခွာမယ့် သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကြေညာပေးဖို့တော့ ယူရိုပါလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲကို စောင့်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ချယ်ဆီးအသင်း ဘုတ်အဖွဲ့အား ဟာဇက်က သူ့ရဲ့နောက်ဆုံး ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲကို ကစားပေးခဲ့ပြီဆိုတာကို အသိပေးထားပြီးပါပြီ။ ကလပ်အသင်းဘက်က ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်နဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ဆိုင်ရာ ညိနှိုင်းမှုတွေကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီး ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင် သန်း 100 ရရှိဖို့ ကြိုးစားသွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စပိန်ကလပ်ဘက်က ဒီလမကုန်ခင်မှာပဲ သဘောတူညီမှုကို ရှာဖွေသွားတော့မှာပါ။
ချယ်ဆီးဟာ ဒီရာသီအတွက် နောက်ဆုံးသောပွဲကိုတော့ မေလ 29 ရက်နေ့ ယူရိုပါလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲအဖြစ် အာဆင်နယ်နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တာပြီးမှ သူ့ရဲ့အနာဂတ် အစီအစဉ်တွေကို ထုတ်ဖော် ကြေညာမှု ပြုလုပ်နိုင်မှာပါ။ ဒီရာသီအတွက် အခြေအနေတွေကို ရှင်းလင်းလိုပြီလို့ ဟာဇက်က ပြောပါတယ်။
ဟာဇက်က “ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျနေ်ာ ဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ပရိသတ်တွေနဲ့ ခင်ဗျားတို့တွေ စောင့်မျှော်နေသလိုပဲ ကျနော်လည်း စောင့်မျှော်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနေ်ာရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြုလုပ်ထားပြီးပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ကျနေ်ာနဲ့ပဲ ဆိုင်တာတော့ မဟုတ်ဘူး။ အရင်နှစ်ပတ်လောက်တည်းက ကလပ်ကို ပြောထားခဲ့ပါတယ်။ ကျနေ်ာတို့ ဗိုလ်လုပွဲ ကစားရမှာဖြစ်ပြီး ကြည့်ကြတာပေါ့။
အဲ့တာက အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေလား? မဖြစ်ပါဘူး။ ကွင်းထဲမှာ ကစားနေရချိန်မှာတော့ ဘောလုံးနဲ့ပဲ အထူးအာရုံစိုက် ကစားပါတယ်။ ကျနေ်ာ ကွင်းထဲမှာ ရှိနေချိန်မှာ အစွမ်းကုန် ပေးဆပ်ကစားပါတယ်။ ကျနေ်ာရဲ့ အခြေအနေနဲ့ ကလပ်အသင်းရဲ့ အခြေအနေကို မစဉ်းစားပါဘူး။ ပွဲတွေကို အနိုင်ရဖို့ပဲ စဉ်းစားပါတယ် ” လို့ ပြောပါတယ်။
ရာသီကုန် အဆင်လေးအတွင်း ဝင်နိုင်ခဲ့တာက ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ပြောင်းလဲဖို့ ဖြစ်စေသလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းကိုတော့ ဟာဇက်က “ မဖြစ်ပါဘူး။ အဲ့တာက ကျနေ်ာ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မပြင်စေခဲ့ဘူး။ ကျနေ်ာကတော့ ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ရမှာကို ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါလောက်ပါပဲ ” လို့ ပြန်လည် ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။
[Unicode] အီဒငျဟာဇကျကတော့ သူ့ရဲ့ အနာဂတျအတှကျ ဆုံးဖွတျခကျြကို ပွုလုပျထားခဲ့ပွီဖွဈပွီး ရီးရဲလျမကျဒရဈ အသငျးကို ပွောငျးရှဖေို့ စိတျပိုငျးဖွတျခဲ့ပါပွီ။ ဒါပမေယျ့လို့ ဘယျဂြီယံကစားသမားဟာ ကလပျအသငျးကနေ ထှကျခှာမယျ့ သူ့ရဲ့ဆုံးဖွတျခကျြကို ကွညောပေးဖို့တော့ ယူရိုပါလိဂျ ဗိုလျလုပှဲကို စောငျ့ပေးရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ခယျြဆီးအသငျး ဘုတျအဖှဲ့အား ဟာဇကျက သူ့ရဲ့နောကျဆုံး ပရီးမီးယားလိဂျပှဲကို ကစားပေးခဲ့ပွီဆိုတာကို အသိပေးထားပွီးပါပွီ။ ကလပျအသငျးဘကျက ရီးရဲလျမကျဒရဈနဲ့ အပွောငျးအရှဆေို့ငျရာ ညိနှိုငျးမှုတှကေို ဆကျလကျ လုပျဆောငျရမှာဖွဈပွီး ပွောငျးရှကွေ့ေး ပေါငျ သနျး 100 ရရှိဖို့ ကွိုးစားသှားရမှာ ဖွဈပါတယျ။ စပိနျကလပျဘကျက ဒီလမကုနျခငျမှာပဲ သဘောတူညီမှုကို ရှာဖှသှေားတော့မှာပါ။
ခယျြဆီးဟာ ဒီရာသီအတှကျ နောကျဆုံးသောပှဲကိုတော့ မလေ 29 ရကျနေ့ ယူရိုပါလိဂျ ဗိုလျလုပှဲအဖွဈ အာဆငျနယျနဲ့ ယှဉျပွိုငျကစားသှားရမှာဖွဈပါတယျ။ အဲ့တာပွီးမှ သူ့ရဲ့အနာဂတျ အစီအစဉျတှကေို ထုတျဖျော ကွညောမှု ပွုလုပျနိုငျမှာပါ။ ဒီရာသီအတှကျ အခွအေနတှေကေို ရှငျးလငျးလိုပွီလို့ ဟာဇကျက ပွောပါတယျ။
ဟာဇကျက “ ဟုတျပါတယျ။ ကနျြော ဖွဈခငျြခဲ့တယျ။ ဒါပမေယျ့ မဖွဈခဲ့ပါဘူး။ ပရိသတျတှနေဲ့ ခငျဗြားတို့တှေ စောငျ့မြှျောနသေလိုပဲ ကနြျောလညျး စောငျ့မြှျောနဆေဲ ဖွဈပါတယျ။ ကနျြောရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြကို ပွုလုပျထားပွီးပါပွီ။ ဒါပမေယျ့ ကနျြောနဲ့ပဲ ဆိုငျတာတော့ မဟုတျဘူး။ အရငျနှဈပတျလောကျတညျးက ကလပျကို ပွောထားခဲ့ပါတယျ။ ကနျြောတို့ ဗိုလျလုပှဲ ကစားရမှာဖွဈပွီး ကွညျ့ကွတာပေါ့။
အဲ့တာက အနှောကျအယှကျဖွဈနလေား? မဖွဈပါဘူး။ ကှငျးထဲမှာ ကစားနရေခြိနျမှာတော့ ဘောလုံးနဲ့ပဲ အထူးအာရုံစိုကျ ကစားပါတယျ။ ကနျြော ကှငျးထဲမှာ ရှိနခြေိနျမှာ အစှမျးကုနျ ပေးဆပျကစားပါတယျ။ ကနျြောရဲ့ အခွအေနနေဲ့ ကလပျအသငျးရဲ့ အခွအေနကေို မစဉျးစားပါဘူး။ ပှဲတှကေို အနိုငျရဖို့ပဲ စဉျးစားပါတယျ ” လို့ ပွောပါတယျ။
ရာသီကုနျ အဆငျလေးအတှငျး ဝငျနိုငျခဲ့တာက ဆုံးဖွတျခကျြတှကေို ပွောငျးလဲဖို့ ဖွဈစသေလားဆိုတဲ့ မေးခှနျးကိုတော့ ဟာဇကျက “ မဖွဈပါဘူး။ အဲ့တာက ကနျြော ဆုံးဖွတျခကျြကို မပွငျစခေဲ့ဘူး။ ကနျြောကတော့ ကိုယျဆုံးဖွတျရမှာကို ဆုံးဖွတျခဲ့ပါတယျ။ ဒါလောကျပါပဲ ” လို့ ပွနျလညျ ဖွဆေိုခဲ့ပါတယျ။
BREAKING: ပရီးမီးယားလိဂ်မန်နေဂျာတစ်ဦး ရာထူးကနေ ထုတ်ပယ်ခံလိုက်ရပါပြီ။
Transfer: ပရီးမီးယားလိဂ် အပြောင်းအရွှေ့ တရားဝင်ဈေးကွက် ဘယ်အချိန် စဖွင့်မလဲ